USEYIJAJI LE-IDOLS UTHEMBI SEETE - Ilanga News
Home Izindaba USEYIJAJI LE-IDOLS UTHEMBI SEETE
USEYIJAJI LE-IDOLS UTHEMBI SEETE
NGU-UNATHI Nkayi osethi khumu ohlelweni i-Idols isikhala sakhe esizovalwa nguThembi Seete. USEYIJAJI
UMENYEZELWE njengelinye lamajaji e-Idols SA umculi owazakhela udumo eqenjini lomculo iBoom Shaka, eyayivutha ingabaselwe esiteji maphakathi neminyaka ka-1990, ithakwe ngoThembi Seete, uLebo Mathosa ongasekho, uTheo Nhlengethwa noJunior Sokhela. UThembi owayeshaya umdanso owawukitaza abesilisa ebambisene noLebo, ikakhulukazi engomeni yabo ethi, “It’s About Time”, uzovala isikhala esivuleke emuva kokuchithwa komculi ongumethuli wezinhlelo zomsakazo, u Unathi Nkanyi. Le ntokazi edlala indawo kaGladys emdlalweni owuchungechunge, iGomora, okhonjiswa kuMzansi Magic, ifike kanye nomculi we hip hop kwi-Idols, uThabo JR Bogopa ozovala isikhala sikaRandall Abrahams obesebe yijaji kusukela wasungulwa lo mncintiswano eNingizimu Afrika ngoNdasa (March) 2002.
La majaji amasha amenyezelwe emcimbi-ni obuseGoli izolo ngoLwesithathu, njengoba bekwethulwa ukubuya kwalo mncintiswano wo kuthungatha abaculi kuleli. Kulo mcimbi kuphinde kwamenyezelwa nokukhuza ibuya kukaSomizi Mhlongo njengejaji, emuva kokumi swa ngonyaka odlule ngenxa yemibiko eyahlukene eyayithinta umshado wakhe noMohale Motaung. Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka owedlule uSomizi noMohale babasematheni ngesikhathi kuvela izindaba zokuhlukana kwabo nokuhlukumezana ngezindlela ezahlukene. Le mibiko yaholela ekutheni uSomizi amiswe kulo mncintiswano. Ephawula ngokubuya kwakhe uSomizi, uzwakalise ukujabula, waveza nokuthi isigaba sempilo yakhe sangonyaka odlule sibengesinzima kakhulu. Ucele ukungabe esaphawula ngempilo yakhe yangasese kwabezindaba.
UThembi uthe ubenovalo ngokuba yijaji kodwa ngenxa yesipiliyoni neminyaka aseyichithile kulo mkhakha, uyathemba ukuthi kukhona azokutshala kulabo abasenephupho lokuzakhela igama kulo mkhakha. Lo mncintiswano uthathe elinye igxathu kusukela ngonyaka odlule ngenxa yokusabalala kokhuvethe, lapho abantu banxuswe ukuba baziqophe besebethumela izithombemnyakazo (video) zabo becula, kwazise phambilini bebephuma ngobuningi beyohlanganyela lapho kwenziwa khona inhlolokhono. Ukungenela kulo nyaka sekuvaliwe njengoba kwavulwa ngomhla ka-23 kuMasingana kwavalwa mhla ka-5 kwephezulu. UProverb uzoqhubeka nokuba ngumethuli walolu hlelo njengoba ebuye abengomunye wabadidiyeli balo mncintiswano.
Previous articleUSEPHILA NGOKUKHOSELA EMIZINI YABANTU OWADILIKELWA YINDLU
Next articleUbhokodwe wumyeni eficwa neshende alithole kwezokuxhumana